Call itamap to now - Engelska - Burmesiska Översättning och exempel
You searched for: call itamap to nowhere ! (Engelska - Burmesiska)
lets call it today
I've had it. Let's call itaday.
ငါ ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီ၊ ဒီတစ်နေ့ ရပ်ကြပါစို့။
ဘုရားသခင်သည် အလိုတော်ရှိသည်အတိုင်း ကိုယ်ကို ပေးတော်မူ၏။ မျိုးစေ့အသီးအသီးတို့အား လည်း၊ မိမိတို့မျိုးအတိုင်း ကိုယ်ကိုပေးတော်မူ၏။
ပြာသောကြိုးနှင့် ဗေါင်းအပေါ်နား၌ ချည်ထားလေ၏။
ကာလမကြာမမြင့်မှီ ဥရုကလုဒုန် အမည်ရှိ သော လေပြင်း မုန်တိုင်းသည်သင်္ဘောကို တိုက်၍၊
သူတို့သည် ဗာကာလွင်ပြင်၌ ရှောက်သွားစဉ်၊ ထိုလွင်ပြင်ကို စမ်းရေထွက်ရာအရပ် ဖြစ်စေကြပါ၏။ အရင် မိုဃ်းရေလည်း မင်္ဂလာများနှင့် လွှမ်းစေပါ၏။
အနံလက်တဝါးရှိသော ခါးပန်းကို၎င်း၊ ခါးပန်းအပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သော ရွှေတန်ဆာကို၎င်း လုပ်ရမည်။
သိုးသငယ်ကို အပြစ်ဖြေရာယဇ် ပြုလိုလျှင်၊ အပြစ်မပါသော အမကို ဆောင်ခဲ့ရမည်။
ထိုနေ့မှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် ဣသရေလအမျိုး၌ ထိုသို့သော ထုံးစံဖြစ်စေခြင်းငှါ စီရင်ထုံးဖွဲ့သတည်း။
ဟေရမုန်တောင်ကို ဇိဒုန်လူတို့သည် စိရုန်ဟူ၍ ၎င်း၊ အာမောရိလူတို့သည် ရှုနိရဟူ၍၎င်း ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။
မောရှေအား ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ သန့်ရှင်းသော သင်းကျစ်ပြားကိုလည်း ရွှေစင်နှင့်လုပ်၍ တံဆိပ်ပေါ်မှာ အက္ခရာတင်သကဲ့သို့၊ ထာဝရဘုရားအား သန့်ရှင်းခြင်းဟု အက္ခရာတင်၍၊
Artists and South Korean net users have labeled itanew form of enhanced censorship on cultural contents andaregression in freedom of expression.
အနုပညာရှင်များနှင့် တောင်ကိုရီးယား အင်တာနက်အသုံးပြုသူများက လူမှုရေးရာအကြောင်းအရာများအတွက် ပြုပြင်ထားသော ဆင်ဆာပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်စွာဖော်ပြခွင့်ကို ဆန့်ကျင်နေသည်ဟု တံဆိပ်ကပ်ပေးလိုက်ကြသည်။
ထိုအခါ ဟေရှာယက၊ အိုဒါဝိဒ်အမျိုးသားတို့၊ နားထောင်ကြလော့။ သင်တို့သည် လူကိုငြီးငွေ့စေသည် သာမက၊ ငါကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်ကို ငြီးငွေ့စေကြ မည်လော့။
ထိုနောက်ဒါဝိဒ်မြို့၌ အိမ်တော်တို့ကို ဆောက် တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏ သေတ္တာတော်ဌာနကို ပြင်၍ တဲတော်ကိုလည်း တည်တော်မူပြီးမှ၊
ဗာလ ဆင်းတုကို၎င်း၊ ကျောင်းကို၎င်း ဖြိုဖျက် ၍ ယနေ့တိုင်အောင် ကိုယ်သုတ်သင်ရာ အိမ်ဖြစ်စေ ကြ၏။
ထိုမြို့၌နေသော ဆင်းရဲသားပညာရှိတယောက် သည် မိမိပညာအားဖြင့် ထိုမြို့ကို ကယ်တင်၏။ သို့သော် လည်း၊ ထိုဆင်းရဲသားကို အဘယ်သူမျှ မအောက်မေ့။
သင်သည် ဤတော၌ ငါတို့ကို သတ်လို၍ နို့နှင့် ပျားရည်စီးသော ပြည်မှ ဆောင်ခဲ့သော်လည်း၊ ငါတို့ အပေါ်၌ လုံးလုံးမင်းမပြုရလျှင်၊ စိတ်မပြေသေးသည် တကား။
ညဦးယံ၌လည်း မီးခွက်တို့ကို ထွန်းသောအခါ၊ ထိုပလ္လင်ပေါ်မှာ နံ့သာပေါင်းကို ရှို့ရမည်။ ထိုသို့ သင်တို့ သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည် ထာဝရဘုရား ရှေ့တော်၌ အစဉ်အမြဲ ပြုရသော နံ့သာ ပေါင်းရှို့ခြင်း ဖြစ်သတည်း။
i am proud of you (Engelska>Tagalog)hurt (Engelska>Afrikaans)essay on mera basta in urdu (Engelska>Hindi)opinion of company financial advisor (Engelska>Kinesiska (förenklad))bluetooth tethering (Engelska>Hindi)ancaman komunis (Malajiska>Kinesiska (förenklad))buongiorno bambini (Italienska>Ryska)i mean i heart you (Engelska>Hindi)apa maksud got dalam bahasa inggeris (Engelska>Malajiska)purane din bahut yaad aate hai (Hindi>Engelska)kada pallu (Tamil>Engelska)xin lỗi tôi đi ngủ trước nhé (Vietnamesiska>Engelska)berserakan (Malajiska>Kinesiska (förenklad))esal insect (Tamil>Engelska)garibo par daya karo (Engelska>Hindi)depliant (Italienska>Tyska)pokhoda cyka (Ryska>Engelska)intentio obliqua (Latin>Spanska)in my free time enjoy watch tv (Engelska>Portugisiska)rasi bintang (Indonesiska>Franska)come as you are (Engelska>Malajiska)kvorum (Tjeckiska>Franska)personenauto (Holländska>Polska)turai meaning in telugu (Telugu>Hindi)canicas (Spanska>Katalanska)